May 2016 | ပြည်သတင်း
မြစ်ကမ်းပါးပြို၍ နေအိမ်နှင့်ခြံမြေများဆုံးရှုံးသွားမှုကြောင့် လယ်မြေအပေါ်နေအိမ်ဆောက်လုပ်မှုအား မြို့နယ်မြေစာရင်းဌာနက ၈-ရက်အတွင်းအပြီးဖယ်ရှားခိုင်း
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်ခရိုင်၊ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ဆင်တဲအုပ်စုအတွင်းမှာရှိသည့် စမ်းပေါက်ချောင်းကျေးရွာ ဧရာဝတီမြစ်-ကမ်းပါးပြိုကျမှုကြောင့် ကမ်းပါပြိုကျသူများစုပေါင်း၍ ဆင်တဲကျေးရွာအုပ်စု၊အောင်စင်္ကြာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း နှင့် မိုလ်းကောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတောင်ခြေတွင်ရှိသော လယ်မြေများအားစုပေါင်းဝယ်ယူ၍ ပြောင်းရွေ့လာခဲ့ကြရာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ ပိတ်ပင်တားစီး၍ ယင်းလယ်မြေများအပေါ်အိမ်ဆောက်လုပ်နေခြင်းကို ၈-ရက်အတွင်း ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရန် လယ်မြေပိုင်ရှင်များထံသို့ စာများထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ဆင်တဲအုပ်စု၊စမ်းပေါက်ချောင်းကျေးရွာ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါးဘေးနေထိုင်ကြသူများသည် မေ-၁၀ ရက်နေ့ခန့်မှာ အိမ်ခြေပေါင်း ၂၀-ခန့််မှ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါးများပြိုကျလာမှုကြောင့် လူနေအိမ် နှင့် ခြံမြေများပျက်စီးခဲ့၍ လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးမရနိုင်သည့် လယ်မြေ ၁၀-ဧကအား သိန်းတစ်ရာကျော်ဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစုပေါင်း၍ ၀ယ်ယူပြောင်းရွေ့လာခဲ့ပြီး မေ-၁၃ ရက်နေ့တွင် ပန်းတောင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ တိုးချဲ့ကွက်သစ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပေးရန် ပြောင်းရွေ့လာသူများမှ လက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြထားခဲ့ကြောင်းသိရပြီး ယင်းနေအိမ်များတည်ဆောက်စဉ်မှာ ပန်းတောင်းမြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ လာရောက်ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်း ပြောင်းရွေ့လာသူများထံက သိရသည်။
“မြစ်ကမ်းတွေပြိုကျလာပြီး မြစ်ထဲကိုအိမ်ကပါသွားပြီ နေစရာမြေမရှိလို့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစုပေါင်းပြီးလယ်မြေ၀ယ်နေတာကို မြို့နယ်မြေစာရင်းရုံးကလာတားဆီးကြပါတယ်။ကမ်းပါးပြိုကျချိန်မှာ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်။ဘယ်ဌာနကမှမကူညီဘူး။ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ်ပြောင်းရွေ့လာရတာ။ပြောင်းရွေ့လာပြီးမှ စုပေါင်းဝယ်ယူထားတဲ့လယ် ၁၀-ဧကအပေါ်မှာအကွက်လေးတွေရိုက်ပြီးအိမ်တွေဆောက်ပြီးမှ လာတားဆီးကြတယ်။ထပ်ဝယ်စရာပိုက်ဆံလဲမရှိတော့ဘူး။ထပ်ပြောင်းစရာမြေနေရာလဲမရှိဘူး။သက်ဆိုင်ရာဌာနကမြေနေရာတွေချမပေးဘူး။ စက်ရုံမှူးကအစ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကလည်းကူညီကြတယ်။ကျောတစ်နေရာရလို့ စိတ်ချမ်းသာပြီဆိုရုံပဲရှိသေးတယ် ခုလကုန် ဖျက်ခိုင်းနေပြီ။ဒုက္ခတွေအများကြီးရလို့သေချင်တာပဲသိပါတော့တယ်။”ဟု စမ်းပေါက်ချောင်းရွာမှ မြစ်ကမ်းပါးပြိုကျ၍ ပြောင်းရွေ့လာသူ မအေးမြင့်-ကပြောသည်။
အဆိုပါ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါးများပြိုကျလာမှုကြောင့် ပြောင်းရွေ့လာသူများထဲတွင် ကျောင်းသား ၁၁-ဦးပါရှိပြီး အသက်ရွယ်အိုးမင်း၍ ကျန်းမာရေးညံ့နေသူများ ငွေကြေးခက်ခဲသူများ အများဆုံးပါရှိနေမှုတို့ကြောင့် ထပ်မံရွေ့ပြောင်းရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထစုပေါင်း၍ ၀ယ်ယူထားသည့် လယ်မြေများများအပေါ် ပေ-၆၀x၄၀ အကွက်ရိုက်ယူ၍ စုပေါင်းနေထိုင်ရန်စီစဉ်လျှက်ရှိနေပြီး ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါးများဆက်လက်ပြိုကျနေမှုကြောင့် ထပ်မံ၍ အိမ်ခြေပေါင်း ၅၀-ခန့်ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း ပြောင်းရွေ့လာသူများထံကသိရသည်။
“ကမ်းပါးပြိုတဲ့သူတွေအမှန်တစ်ကယ်နေထိုင်တာဆိုရင် သက်ညှာစွာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပေးရမှာပေါ့။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လယ်မြေထဲမှာအိမ်တွေတည်ဆောက်လာရင်တော့ ဥပဒေအရထိရောက်စွာအရေးယူမှာပါ။လက်ရှိကမ်းပါးပြိုလို့ပြောင်းလာတဲ့သူတွေနဲ့လယ်မြေပိုင်ရှင်နဲ့အဆင်ပြေဖို့လဲလိုတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ကမ်းပါးပြိုလို့နေစရာမရှိတဲ့သူတွေအတွက် သက်ညှာစွာစဉ်းစားပေးရမှာပါ။အိမ်တွေလဲဆောက်ပြီးနေပြီဆိုတော့ ကမ်းပါးအမှန်တစ်ကယ်ပြိုလို့ပြောင်းလာတဲ့သူတွေ လ/န ၃၉-လျှောက်ရမယ်။အခြားမြေသုံးစွဲခွင့်လျှောက်တင်ရမယ်။အမှန်တစ်ကယ်ကမ်းပါးပြိုပြီး အမှန်တစ်ကယ်ပြောင်းဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်မှသက်ညှာစွာစဉ်းစားပေးလို့ရပါမယ်။”ဟု ပြည်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဝင်း-ကပြောသည်။
အဆိုပါ မြစ်ကမ်းပါးများပြုကျ၍ ပြောင်းရွေ့လာသူများအား ကစစ(၁၆) မိုလ်းကောင်းစက်မှုကျောင်းနှင့် အောင်စင်္ကြာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊မိုလ်းကောင်းကျောင်းတိုက်တို့မှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေမှုများအပြင် အခြားသောအလှူရှင်များမှ လာရောက်ကူညီပေးနေမှုများရရှိနေခဲ့ပြီး ပြောင်းရွေ့လာသည့် အိမ်ခြေပေါင်း ၂၀-ခန့်ရှိ၍ ပြောင်းရွေ့လာလူဦးရေ ၅၀-ခန့်ရောက်ရှိနေပြီး ယင်းလယ်မြေများအပေါ် အိမ်ယာကွက်တည်ဆောက်အသုံးပြုနေမှုကြောင့် မေ-၁၇ ရက်စွဲပါ စာဖြင့် လာမည့် ၄.၆.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အပြီးရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးရန် ပန်းတောင်းမြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးရဲဝင်း-မှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ လယ်မြေပိုင်ရှင်များထံသို့ ယင်းစာများထုတ်ပြန်ကြေငြာထားခဲ့ပြီး သတ်မှတ်ရက်ထက်ကျော်လွန်၍ ဖယ်ရှားခြင်းမပြုပါက လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ ၂၀-အရ တရားစွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းစာအရသိရသည်။
စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်များဆောက်လုပ်ရာ ၆-လခန့်အကြာတွင် နံရံများ နှင့် ဖောင်ဒေးရှင်းများ အက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့
၂၀၁၅/၁၆-ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်(ငွေလုံးငွေရင်း)ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် Autumn Dream-ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်သည့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်း၊ ပြည်မြို့နယ်အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းဆောင်အသစ် ငါးဆောင်လုံးမှာ တည်ဆောက်ပြီး ၅-ခန့် ၆-လခန့်မှာတွင် နံရံများ နှင့် အောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းများ အက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်ကော်မတီများထံကသိရသည်။
အဆိုပါ နံရံများ နှင့် အောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းများကွဲအက်နေသည့် စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီး မေ ၁၁ ရက်နေ့ နှင့် မေ ၂၂-ရက်နေ့တို့တွင် ပြည်မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အဖွဲ့မှ လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုများ၊ အချက်လက်ယူခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကုမ္ပဏီကနေတစ်ဆင့် ပြည်မြို့က ကန်ထရိုက်ကိုပြန်တည်ဆောက်ခိုင်းတာ။ကျွန်တော်တို့လည်းပထမ ကျွန်တော်တို့တစ်ကျောင်းထဲဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။ နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တွေလိုက်လံစုံစမ်းလိုက်တော့ သူတို့ ကန်ထရိုက်ယူတည်ဆောက်တဲ့ စာသင်ကျောင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုဖြစ်နေတယ်။အောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းတွေ အကြီးကြီးကွဲအက်တာနဲ့ နဲနဲလေးကွဲအက်တာပဲကွာခြားပြီး ကျောင်းဆောင်နံရံတွေအကုန်လုံးကတော့ အက်ကွဲတာခြင်းတူညီတယ်။ကုမ္ပဏီကလည်း စာသင်ကျောင်းငါးခုစလုံးအတူတူပဲ ကန်ထရိုက်ယူတာလည်းအတူတူပဲ။အရည်အသွေးညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့စာရင်းစည်းကမ်းထဲက အတိုင်းမသုံးဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြောတော့လည်းလက်မခံဘူး။ဒီကျောင်းဆိုရင်နောက်ထပ် ခြောက်လတောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ခုလိုကွဲအက်နေချိန်မှာ ကလေးတွေစာသင်ဖို့မသင့်တော်ဘူး။တတ်သိပညာရှင်တွေစီစစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ကချပေးတဲ့ ဒီဘဏ္ဍာငွေတွေကို ဒီကျောင်းဆောင်မှာ အကုန်လုံးအသုံးချပေးစေချင်တယ်။ခုတိုင်းကလေးတွေကိုစာသင်နေမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကျောင်းဆောက်ပြီးတာ ခြောက်လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။”ဟု ဦးမောင်ဝင်း အုပ်ဆွဲအုပ်စု၊၀န်တင်ဆိပ်ကျေးရွာ၊ရွာမိရွာဖ ကပြောသည်။
အဆိုပါ ပြည်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျောင်းဆောင်သစ်များဖြစ်သည့် ကံပေါ်ရိပ်သာကျောင်း အလက(၁) ပေ-၁၀၀x၃၀-RC-(၂)နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်၊အလက(ခွဲ)ဇီးအုပ် ပေ-၆၀x၃၀ တစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်၊မှုလွန်-ဗြဟော်ကျေးရွာ ပေ-၆၀x၃၀ တစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်၊အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အရှေ့ပေါက်တော ပေ-၉၀x၃၀ တစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်၊အလက(ခွဲ)၀န်တင်ဆိပ်ရွာ ပေ-၉၀x၃၀ တစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ် စသည့်အဆိုပါ စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ငါးဆောင်လုံးမှာ တည်ဆောက်ပြီး ၅-လ နှင့် ၆-လခန့်မှာတွင် နံရံများ၊အောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းများ အက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အဆိုပါစာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ငါးဆောင်အနက် ၀န်တင်ဆိပ်ကျေးရွာအတွင်းတည်ဆောက်ထားသည့် စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်မှာ ပိုမိုဆိုးရွားစွာ အောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းများ အက်ကွဲမှုများ နံရံများအက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
“၂၀၁၅/၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ချထားပေးတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုဒေသခံတွေသင်ပြချက်အရလိုက်ကြည့်တယ်။စာသင်ကျောင်းတွေဟာ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေနိမ့်တယ်။ပက်ကြားတွေကွဲအက်တယ်။အမိုးတွေက ပြုတ်ကျတော့မဲ့အတိုင်းနိမ့်ကျနေတာတွေဖြစ်နေတယ်။တစ်ချို့ဆို ပြုတ်ကျနေတာတွေအထိရှိနေတယ်။သတ်မှတ်အရည်သွေးနဲ့ညီအောင်ဆောက်မသွားဘူး။ဘယ်အမျိုးအစားတွေနဲ့ဘယ်လိုဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ စာရင်းနဲ့လည်းကွဲလွဲနေတာတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီကိစ္စတွေကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကနေ အဆိုတင်သွင်းထားပြီးပါပြီ။သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြေားထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ပြည်ခရိုင်ပညာရေးမှူး နဲ့ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောထားခဲ့ပြီးပါပြီ။စာချုပ်မှာ ငါးနှစ်သက်တမ်းအာမခံရမယ်လို့ပါတယ်။အခုကျောင်းတွေက ငါးလတောင်မပြည့်သေးမှီခုလိုတွေဖြစ်တာတော့လွန်ပါတယ်။Autumn Dream-ကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျွန်တ်ာတို့ဒေသခံတွေညှိနိုင်းမယ်။စာချုပ်ပါတဲ့အတိုင်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ယံလေးဖာထေးနေတာတွေလည်း အခုပြန်အက်ကွဲနေခဲ့ပါတယ်။ဖာထေးပြုပြင်နေတာကိုမလိုလားပါဘူး။စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်အတိင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။” ဟု ပြည်မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇေယျ ကပြောသည်။
အဆိုပါ စာသင်ကျောင်းနံရံများ နှင့် အောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းများ ကွဲအက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Autumn Dream-ကုမ္ပဏီမှ GM-ဦးတေဇာလင်းမြင့်-ဖုန်း ၀၉-၄၂……..နှင့် ပြည်မြို့နယ်ပညာရေးမှူး ဦးငြိမ်းမြင့်-ဖုန်း-၀၉-၄၂…….-တို့အား အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်းဖုန်းကိုင်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ဓါတ်ပုံသတင်း ပြည် ဇွန်လ(၁)ရက်နေ့
ဓါတ်ပုံသတင်း LeaveaComment
ပြည်မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဇွန်လ(၁)ရက်နေ့
၂၀၁၆ /၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းစဖွင့်သည့်နေ့တွင်
ပြည်မြို့ ရွာဘဲရပ်ကွက် ဆံတော်ရပ်ကွက် မြို့သစ်ရပ်ကွက်
ရှိ အခြေခံပညာ အ.မ.က ကျောင်းနှင့် အ.ထ.က ကျောင်း
ချိန် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ကူညီဆောင်
မင်းကြိုက် ကျောက်မျက်-လက်ဝတ်ရတနာ ဖန်စီနှင့်အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုင်
Ph; 09 796997388 , 09 796 996499 ,09 796996488
“မင်္ဂလာပါ”ခင်မင်ရသော မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ မင်္ဂလာပါ။
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ တင့်တယ်သော ကိုယ်ဟန်မူယာကောင်းခြင်း
ဆိုင်မှ ပုလဲရတနာများဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
အလှူမင်္ဂလာဆောင် ပွဲလမ်းသဘင်များအတွက် ငွေကြေး
အများကြီးကုန်ကျစရာမလိုပဲ ဈေးသက်သာစွာဖြင့် ဖက်ရှင်
(၁)မြန်မာ့မြိတ်ပုလဲစစ်နှင့်နိုင်ငံခြား ပုလဲမျိုးစုံ ၁၅’ ရည်ပြည့်ရွှေ၊
ရွှေဖြူအစရှိသည်တို့နှင့် စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်းများကို အပ်ထည်အော်
(၂)မွေးပုလဲ ၊ ကမာပုလဲ(ကြိတ်ပုလဲ)မျာကို korea ငွေပေါ့နှင့်သီ
ထားသော one-set များ ဒီဇိုင်းစုံဖက်ရှင်ကျစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။
(၃)ဖန်စီပုလဲများကိုလည်း အရောင်မှိန်သွားရင် ရွှေရည်အစစ်
one-set များကိုလည်းဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
-Italy 925 accessories မျိုးစုံ
-Lucky Stone s,Lovely Stone s,မျိုးစုံ(နေ့အလိုက်မွေးနေ့
အမှတ်တရပေးရန် ကျောက်ပန်ချီကား မျိုးစုံ၊အခြားဖန်စီ
မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ်များစိတ်ချမ်းမြေ့ကျေနပ်စွာ ဝယ်
"Barcamp Pyay 2016"
Barcamp Pyay 2016 Official Logo ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
ပြိုင်ပွဲဝင်များအနေဖြင့် မှီငြမ်းနိုင်ရန် ယခင်နှစ်များမှ အသုံးပြုခဲ့သော Logo များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
ပြိုင်ပွဲကာလကို (၃၀.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှ (၁၅.၆.၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ သက်မှတ်ထားပါသည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်ထဲမှ Winner အဖြစ် တစ်ဦးထဲကိုသာ ရွေးချယ်ပါမည်။
ဆုကြေးငွေ- ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ်သိန်းကျပ်တိတိ)နှင့် Barcamp Pyay 2016 ၏ဂုဏ်ပြုဆုတံဆိပ် ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- Logo တွင် Barcamp မီးတောက်ပုံ ပါရှိရမည်။
- Barcamp Pyay 2016 စာသား ပါရှိရမည်။
- ပြည်မြို့၏မပါမဖြစ် အဓိကနေရာ (ပြည်၏ image ကိုထင်ဟပ်စေသော နေရာ/ပုံ) ပါရှိရမည်။
- Logo အား ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရောင် ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ပြိုင်ပွဲဝင်(၁)ဦးလျှင် ပုံ(၃)ပုံထိ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
- File Resolution (300) dpi နှင့် (600) dpi ကြားရှိရမည်။
- .psdဖိုင် (သို့) .tiff ဖိုင်ဖြင့်သာ ယှဉ်ပြိုင်ကြရမည်။
- ဖိုင်ကို Stick ,CD(၂)နှစ်မျိုးလုံးဖြင့်ထည့်သွင်း၍ Netware Computer Centre (NCC) ၀ါရုံလမ်း၊ ပြည်တက္ကသိုလ်အနီးသို့ ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်အပ်နှံရမည်။
- ပြိုင်ပွဲဝင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အမည် ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၊ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကပ်ပြားအမှတ် ၊ လိပ်စာ စသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို A4 စာရွက်ဖြင့် Logo ဖိုင်အား လာရောက်အပ်နှံသည့်အခါတွင် တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရပါမည်။
- နယ်မှပြိုင်ပွဲဝင်များအနေဖြင့် ဖိုင်ကို yemyintaung.ncc@gmail.com သို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်တကွ ပို့၍ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။
- Logo ဖိုင်များ ပို့ရန် ကာလကို (၃၀.၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၁၀.၆.၂၀၁၆)ရက်နေ့ ည(၈:၀၀)နာရီထိသာ သက်မှတ်ထားပါသည်။
- သက်မှတ်ရက် ၊ သက်မှတ်ချိန်ထက် ကျော်လွန်ပီးမှ ပို့သော Logo ဖိုင်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးမည် မဟုတ်ပါ။
Remark ; တစ်စုံတစ်ရာအငြင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာပါက Barcamp Pyay 2016 Organizers Team ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ဖြစ်သည်။
*** ရွေးချယ်ခံရသော Logo အား မကြာမီကျင်းပတော့မည့် Barcamp Pyay 2016 ပွဲကြီးတစ်ခုလုံး၏ Official Logo အနေဖြင့် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဦးသူရထွဋ် - 09973780447 / 09796984366
ဦးကျော်စည်သူအောင် - 09788888465
Barcamp Pyay 2016 Organizers Team
သနီချောင်းကမ်းပါးပြိုကျလာမှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၄၀-ကျော်စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိနေပြီး ပြောင်းရွေ့ရန်အခက်ခဲများဖြစ်ပေါ်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်ခရိုင်၊ပန်းတောာင်းမြို့နယ်၊ဇရပ်လှအုပ်စုအတွင်းရှိ ဇရပ်လှရွာ၊၀ါးတိုက်မြောင်စသည့်ကျေးရွာရှိ သနီချောင်းရေစီးမှုဒဏ်တို့ကြောင့် သနီချောင်းကမ်းပါးများပြိုကျ၍ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာနေအိမ်ပေါင်း ၄၀-ကျော်စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေရောက်ရှိနေမှုကြောင့် ပြောင်းရွေ့ရန်ခက်ခဲမှုများဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်းဒေသခံများထံကသိရသည်။
“အိမ်ကအမြန်ရွေ့နေရတယ်။ဘယ်သူဘယ်ကမှလာမကူညီဘူး။ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ်ပြောင်းရမှာ။ကမ်းပါးပြိုတာက အိမ်တိုင်တွေအထိရောက်လာလို့ အိမ်တိုင်တွေတောင်မြေနဲ့လွတ်လာပြီ။ထပ်ပြီးရှေ့တိုးလို့လမ်းမရတော့ဘူး လမ်းမကြီးကခံနေပြီ။နောက်မှာလည်းကမ်းပါးကပြိုနေပြီ။မြေနေရာလေးတော့ပေးစေချင်ပါတယ်။ရေကာတာတွေရိုက်ပေးစေချင်တယ်။ရွာကပျက်နေပြီ ကြာရင်ရွာပါပျောက်လိမ့်မယ်။မြေ၀ယ်ဖို့ပိုက်ဆံလဲမရှိပါဘူး။ဒုက္ခတွေရောက်နေပါတယ်။အိမ်ပြောင်းရွေ့ရမယ်ဆိုရင် ပစ္စည်းတွေအကောင်းတိုင်းမရတော့ပါဘူး။” ဟု ဇရပ်လှအုပ်စု၊ဇရပ်လှကျေးရွာ ဦးဥာဏ်ဦးကပြောသည်။
အဆိုပါ သနီချောင်းရေသည် ဧရာဝတီမြစ်နှင့်တစ်ဆက်ထဲရှိနေပြီး ယင်းသနီချောင်းကမ်းပါးပြိုကျနေမှုမှာပြီးခဲ့သည့် ၂-နှစ်ခန့်ကတည်းကစတင်ပြိုကျလာခဲ့ရာ ယခုနှစ်တွင်ပိုမိုဆိုးရွာစွာကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများထံကသိရသည်။
“သုံးထပ်ကလယ်ပေါ် နယ်ကျော်တဲ့ကျောင်းကြီးဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲဒိကျောင်းကြီးကရှေးဟောင်းကျောင်းတော်ကြီးကမ်းပါးပြိုကျလာမှုတွေကြောင့် စိုးရိမ်နေရတယ်။ကမ်းပါးပြိုကျနေမှုကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကတည်းကတင်ပြခဲ့ပေမယ့်ဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။အခု အစိုးရလက်ထပ်မှာဆက်တင်ပြထားတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးလာကြည့်ပြီးလိုအပ်တာတွေကို သက်ဆိုင်ရာတွေကိုတဆင့်ထပ်တင်ပေးပြပေးမယ်လို့ပြောသွားကြတယ်။အခုချိန်ကတည်းကမှဒီကမ်းပါးတွေကို ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မပေးရင်ရွာပျောက်သွားလိမ့်မယ်။အခုရွာကပျက်တောင်နေပြီ။ကမ်းပါးထိမ်းနံရံတွေပြုလုပ်ပေးစေချင်တယ်။ပြောင်းရွေ့နေရသူတွေကိုကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။”ဟု ဇရပ်လှအုပ်စု၊ဇရပ်လှကျေးရွာ ဦးတုတ်တီ-ကပြောသည်။
အဆိုပါ သနီချောင်းကမ်းပါးပြိုကျလာမှုသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ရက်ခန့်လောက်မှာ စတင်ပြန်လည်၍ ဆိုးရွားစွာပြိုကျလာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပြီး ၂၀၁၆-ခုနှစ် မိုးရာသီကာလတွင်ထပ်မံပြိုကျလာနိုင်ဖွယ်ရှိနေမှုကြောင့် ပန်းတောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ဒေသခံများကိုယ်စား သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့မှ မေ-၂၉ ရက်နေ့တွင် စတင်၍တင်ပြထားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“လောလောဆယ်သတင်းပို့ထားတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးပါတယ်။လတ်တလာဘာမှမကူနိုင်သေးပေမဲ့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်မယ့် လူနေအိမ်တစ်ချို့ကို ရွေ့ပြောင်းပေးထားတာတော့ရှိပါတယ်။ကမ်းပါးပြိုကျနေမှုကို မြို့နယ်ထွေအုပ်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆီကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်နဲ့ရပ်မိရပ်ဖတွေကူညီပြီးရွေ့ပြောင်းအိမ်တွေကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးပါတယ်။အိမ်ခြံတွေကို အနောက်က ကမ်းပါးပြိုရင် အရှေ့တိုးဆောက်တယ်။အရှေ့ကပြိုရင်အနောက်တိုးဆောက်တာတွေတော့ရှိပါတယ်။အိမ်ခြံတွေကတော်တော်ကျဉ်းနေပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ရွေ့စရာမြေမရှိတော့တဲ့လူတွေက သူများအိမ်မှာကပ်နေရတာတွေလဲရှိနေပါတယ်။” ဟု ပန်းတောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး-အငယ်တန်းစာရေး-ဇရပ်လှအုပ်စုကျေးရွာတွင်တာဝန်ယူနေရသူ ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း ကပြောသည်။
အဆိုပါ သနီချောင်းကမ်းပါးပြိုကျနေမှုတို့ကြောင့် ဇရပ်လှအုပ်စုအတွင်းရှိ ဇရပ်လှကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၃၆-အိမ် နှင့် ၀ါးတိုက်မြောင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၆-အိမ်တို့မှာစိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေကြောင်း သက်ဆိုင်ရာများသို့တင်ပြမည့် စာရွက်စာတမ်းများအရသိရသည်။
ဆရာဦးကျော်ဆန်း အင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကားသင်တန်းမှတန်းခွဲ အသစ်များကို June လ အတွင်းထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
အသစ်များကို June လ အတွင်းထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌အင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှု လိုအပ်ချက်ကြီးမားနေပါသည်။ကျောင်းသားများအနေနှင့်Speakingနှင့်
Listening Skills တွေသာမက Reading နှင့် Writing Skills
Time ---6ရက်နေ့ (5း00-63း0)Pm Mon to Thur
အင်္ဂလိပ်စာ အရေး ၊အဖတ်၊အပြော၊အကြား ကျွမ်းကျင်လိုသူများ
များဖြစ်ကျသော ဦးခင်မောင်လတ် ဆရာကြီး ဦးသိန်းမောင်(ထင်
လင်း)တို့၏တပည့် ဆရာကြီး ဦးမြကြိုင် ထံတွင်(၉)နှစ်တိုင်တိုင်
ပညာနို့ရည်သောက်ခဲ့သူ ဦးကျော်ဆန်း B.A (Psy),TKT(UK),
Dip.In English(YUFL)မှENGLISH PROFICIENCY CLASSES
READING WRITING LISTENING SPEAKING FOUR SKILLS
လုံးသင်ကြားပေးနေပါသည်။ Basic ,Intermediate,Advanced
Level Basic Level (၃) လ Intermediate Level (၃) လ တစ်
တန်းအတွက်လစဉ် လခ(၇၀၀၀)ကျပ် ပေးရုံဖြင့်ကျန်အတန်းများ
ကို အခမဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ကျောင်းသားများ အချိန်မရွေး
ဆက်သွယ်နိုင် ရန် သင်ခန်းစာများကို ပတ်လည်စနစ်ဖြင့်စီစဉ်
ထားပါသည်။သီးသန့်ဝိုင်းများ ကိုလည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါ
Reading (1)7:00 to 8:00 am Basic Leveel (2)8:00
to 9:30 am (3)3:00 to 4:30 pm (4)5;00 to6;30 pm (5)
6;30 to8;00 pm Intermediate Level(1)9;30 to11;00 am
General English(1)12;30 to1;30 pm Senior Reading (1)
1;30 to2;30 pm Saturday to Sunday Basic Leveel (1)
8;00 to9;30 am (2)9;30 to11;00 am (3)4;30 to6;00
pm Intermediate Leveel(1)2;30 to4;00 pm Advanced
Level(1)12;30 to1;30 pm Senior Reading(1)1;30 to2;30 pm ဖြစ်ပြီးသင်တန်းတည်နေရာမှ..................
ဖေ.စ်ဘွတ်တွင် မိတ်ဆွေတယောက်က ဓာတ်ပုံတပုံတင်လာသည် ။ သူတင်လာသောဓာတ်ပုံက နက်လှစွာသောတောင်စောင်းကြီးတလျှောက် မဆုံးနိုင်သောလူတန်းကြီးက အပေါ်မှအောက်သို.နိမ်.ဆင်းသွားသော ဆင်ခြေလျှော တလျှောက်တန်းစီပြီးနေရာယူထားကြသည်မှာ ရှည်လျားလှသောလူတန်းကြီး သုံးလေးတန်းဖြစ်နေပါသည် ။ ထိုလူတန်းကြီးစောင်.ကြိုနေသောအရာကား တောင်တလုံးလိုဖြစ်နေသောနေရာ အပေါ်ဆုံးမှ ဧရာမမြေသယ်ယာဉ်စက်ယန္တယားကြီးကိုဖြစ်သည် ။ထိုဧရာမမြေသယ်ယာဉ် ကြီးပေါ်မှသွန်ချမည်.မြေကြီးများကို လူတန်းကြီးကစောင်.မျှော်နေပုံဖြစ်သည် ။ ဓာတ်ပုံထဲတွင်မြေသယ်ယာဉ်သုံးစီးခန်.တွေ.ရပြီး လူအုပ်ကြီးမှာလည်းတောင်စောင်းတလျှောက် အုပ်စုသုံးလေးဖွဲ.ဖွဲ.ကာ စောင်.မျှော်နေကြပုံဖြစ်သည် ။ထိုဓာတ်ပုံမှာ ကမ္ဘာကျော်ဖားကန်.ကျောက်စိမ်းရတနာမြေ၏ ယနေ.ခေတ်မြင်ကွင်းဖြစ်သည် ။ ထိုဓာတ်ပုံကိုဖေ.စ်ဘွတ်တွင် ပြန် share ထားသူ Kyaw Naing Win က
“ တိုင်းတစ်ပါးသားတရုတ်တွေက အဆီအနှစ်တွေစားပြီး စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ အရိုးလေးထဲက အသားစလေးကို စားခွင့်ရရေးအတွက် အသက်နဲ့ရင်းရှာဖွေနေကြရတဲ့ အိမ်ရှင် သခင်မျိုးဟေ့ဆိုတဲ့ ဒို့ဗမာ . . .” ဟုရေးသားထားပါသည် ။ထိုပုံကိုမြင်သောအခါ ကျောက်စိမ်းတွင်းပိုင်ရှင်မှာ တရုတ်လူမျိုးများဟုတ်သလားမဟုတ်သလားတော.သေသေချာချာမသိရ ၊ ရေမဆေးကျောက်ခေါ်သူဌေးများမလိုချင်သဖြင်.လွှင်.ပစ်သောမြေစာပုံထဲမှကျောက်တုံးကလေးများကို အသက်စွန်.ကာ (ရပ်နေသောမြေစာပုံအချိန်မရွေးပြိုကျကာ မြေအောက်သို.ရောက်သွားနိုင်လေသည် ) ကောက်နေရရှာသူများကတော. ဗမာ ၊ ကချင် ၊ ရှမ်း၊ရ၀မ် ၊လီဆူး စသော မြန်မာနိုင်ငံသားများပဲဖြစ်တာသေချာပါသည် ။မြန်မာအမည်ခံကုမ္မဏီများနောက်ကွယ်တွင် တရုတ်တွေကြီးစိုးနေကြသည်ဟုလည်း အတော်များများကပြောနေကြသည်ဖြစ်ရာ ဟုတ်မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှထိထိရောက်ရောက်စစ်ဆေးသင်.ပါသည် ။ ထိုပုံကိုမြင်သောအခါ ကိုယ်.နိုင်ငံမှာပဲနေ ၍ဤကဲ.သို.အောက်ကျနောက်ကျအလုပ်ကလေးများကိုလုပ်ကိုင်နေရရှာသောမြန်မာလူမျိုးအများစုအတွက်ရင်နာရပေသည် ။ ၁၉၉၈ခုနှစ်ခန်.က နိုင်ငံခြားသားများနှင်.အတူဖားကန်.သို.ကျွန်တော်ရောက်ဖူးပါသည် ။ထိုစဉ်ကဖားကန်.နှင်.ယခုဖားကန်.မြင်ကွင်းသည် မျက်လှည်.ပြသလိုခြားနားခဲ.ပြီ ။ထိုစဉ်ကဖားကန်.သည် ကျောက်တူးသည်ဆိုငြား ၊ ကုမ္မဏီများမှလုပ်ကွက်ဖော်နေကြသည် ဆိုငြား သိုသိုသိပ်သိပ်ရှိလှသည် ။စည်းကမ်းတကျရှိလှသည် ။ ယခုခေတ်လို (အမှန်မှာ၁၈ နှစ်ဟူသည် သိပ်ကြာလှသည်မဟုတ်သေး )စက်ယန္တယားတွေ ၊ယာဉ်ကြီး ယာဉ်ငယ်တွေ ဥဒဟိုသွားလာနေတာတွေ ၊ နက်ရှိုင်းသောချောက်ကမ်းပါးတွေ ၊ တောင်လိုမြင်.သောမြေစာပုံကြီးတွေ ထိုစဉ်ကဘာဆိုဘာမှမရှိပါ ။ဥရုချောင်းသည် သူ.လမ်းလမ်းကြောင်းတွင်အပိတ်အဆို.မရှိစီးဆင်းလျက်ပါ ။ မေခမလိခမြစ်ဆုံဝယ် ရေသည် အောက်ခြေမှကျောက်တုံးလေးများကိုမြင်ရသည်အထိစီးဆင်းလျက်ပါ ။ ရွေတူးဖော်သူတို.ကြောင်. မြစ်ရေများမနောက်ကျိမညစ်ညူးသေးပါ ။ အနှစ်နှစ်ဆယ်နီးပါးအတွင်း သဘာဝပျက်သုဉ်းသွားပုံမှာရင်နာစရာကောင်းပါသည် ။ ထိုသို.အဘက်ဘက်မှပျက်ဆီးခဲ.သော်လည်း ထိုအကျိုးကိုနိုင်ငံသားတို.စံစားခံစားနိုင်လျှင်မူကား ခွင်.လွှတ်နားလည်ပေးလို.ရပါသေးသည် ။ ယခုသော် မြန်မာလူမျိုးအများစုသည် တိုလီမိုလီအလုပ်ကလေးများကို အသက်ကိုရင်း၍ငွေရှာစားရသောဘ၀သို.ရောက်ခဲ.လေပြီ ။အမျိုးဂုဏ်ဇာတိဂုဏ်ဟူ၍ကား ပြစရာမရှိအောင်ပျက်စီးခဲ.ကြပေပြီ ။ အချို.သောဘုန်းဘုန်းတို.သည် ဘာသာခြားများဆိုင်မှာမ၀ယ်ကြ ၊ မစားကြ အားမပေးကြဖို. ဟောပြောလှုံ.ဆော်မှုတွေလုပ်တာကြားဖူးသည် ။ ထိုအယူအဆမှန်မမှန်ကိုမပြောလိုပါ ။ ကိုယ်.ပိုက်ဆံကိုယ်ပိုင်သည်ဖြစ်၍ မည်သူမဆိုဝယ်ချင်သည်.ဆိုင်က၀ယ်ကြပေလိမ်.မည် ။
သို.သော်ထိုသို.အမျိုးဘာသာစသည်ဖြင်.ဟောပြောနေကြချိန်တွင် ဘက္ကဒီးအိဒ်နေ.ရောက်တိုင်း ရှက်ရွံ.ဖွယ်ကိစ္စတခုလည်းရှိပေသေး၏ ။ထိုမြင်ကွင်းကိုမြင်တိုင်းအချုပ်တန်းဆရာဖေ ရေးသော
“တွေးမိတိုင်းအရိုးနာသည် ၊ အမျိုးပါဆဲချင်ပေါ.လေး “ ဟုသာဟစ်လိုက်ချင်တော.သည် ။ထိုမြင်ကွင်းမှာအခြားမဟုတ် အိဒ်နေ.တွင် ဗလီပေါက်ဝ၍ အမဲသားများပေးဝေမည်ကိုအလုအယက်စောင်.နေကြသောမြန်မာများ ကိုမြင်ရခြင်းဖြစ်သည် ။ ထို.နေ.ရောက်တိုင်းပြည်မြို.နှင်.အခြားမြို.ကြီးမြို.ငယ်များတွင်မြန်မာများအမဲသားအနည်းငယ်ရရန်စောင်.မျှော်နေကြသောမြင်ကွင်းကိုတွေ.ကြရသည် ။ ကျွန်တော်.မိတ်ဆွေ ကိုဇော်ကြီး(ခ)ရည်ဇော်မောင်က ဖားကန်.မှရေမဆေးကျောက်ရှာသူများ၏ဓာတ်ပုံကိုမြင်ပြီး “ အစ်နေ့မှာ ဗလီပေါက်ဝကနေအမဲသားအရိုးအရင်းကိုစောင့်တောင်းနေတဲ့ဗမာတွေကိုကြည့်နေရသလိုပါပဲ။
ရင်နာတယ် “ ဟုရေးသားထားပါသည် ။ ဤဆောင်းပါးသည် လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး ထိခိုက်နစ်နာအောင်ရေးသားသည်.ဆောင်းပါးမဟုတ်ပါ ။ မြန်မာလူမျိုးတို.သည် စီးပွားရေးနိမ်.ကျလာသောကြောင်. အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ဟူသည်များမရှိကြတော.ပုံကိုသာ ထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါသည် ။
ယခင်ကဆိုလျှင် မြန်မာများသည်အရာရာတွင်အထက်တန်းကျကျနေလာခဲ.သောလူမျိုးဖြစ်ပါသည် ။ ကူလီထမ်းခြင်း ၊ အညစ်အကြေးကျုံးခြင်း ၊ လန်ခြားဆွဲခြင်းစသောလုပ်ငန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ. လူမျိုးခြားတို.ကလုပ်ကိုင်ပါသည် ။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင် လုပ်အားခဈေးပေါသော အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို.၀င်ရောက်လာပြီး ထမင်းတလုပ် အတွက် ရရာအလုပ်များကိုလုပ်ခဲ.ကြပါသည် ။ မြန်မာများကထိုလူများကိုသင်.တင်.သော အခကြေးငွေပေး၍ခိုင်းစေခဲ.ပါသည် ။ မြန်မာသည် သခင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး အောက်တန်းကျသောအလုပ်ဟူသမျှကို တိုင်းတပါးသား အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသားများကိုခိုင်းစေခဲ.ကြပါသည် ။ နိုင်ငံအတွင်းသို.ချစ်တီးကုလားများ ၀င်ရောက်လာပြီး အင်္ဂလိပ်တို.ဥပဒေဖြင်. ငွေချေးသောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ခဲ.ပြီးနောက် မြန်မာတောင်သူလယ်သမားများစွာသည် ချေးငွေများမဆပ်နိုင်ပဲ အသိမ်းခံကြရသဖြင်.လယ်မဲ.ယာမဲ.ဘ၀သို.ကျရောက်ခဲ.တော.သည် ။ ချစ်တီးမယားဖြစ်ကုန်သူ လူအသိမ်းခံကြရသူပေါင်းမှာလည်းမရေတွက်နိုင်ခဲ.ပေ ။ ဂျပန်ခေတ်သို.ရောက်ပြန်သောအခါ ဂျပန်အလိုတော်ရိများ ၊မိမိတယောက်ကောင်းစားရေးအတွက် နိုင်ငံနှင်.လူမျိုးအပေါ်သစ္စာဖောက်သူများ ရှိလာခဲ.သည် ။ တိုင်းပြည်နှင်.လူမျိုးဆိုသည်ထက် မိမိ ရှင်သန်ရေးသာအဓိကဟူသည်. အောက်တန်းကျသည်.စိတ်ဓာတ်များထွန်းကားလာပြန်သည် ။ ထိုစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလောင်ရာလေပင်.ပေးသည်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုဖြစ်သည် ။ တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးသည် ဆီကိုရေချိုး ၊ဆေးရိုးမီးလှုံ ၊စပါးတောင်လိုပုံဆိုသောခေတ်မှသည် ချိုးစရာရေမရှိ ၊ သုံးစရာငွေမရှိ ၊ ထွန်စရာလယ်မရှိ ၊ လုပ်စရာအလုပ်မရှိသည်.ဘ၀များ ဆီသို.ကူးပြောင်းရောက်ရှိလာခဲ.ပြီဖြစ်သည် ။ မြန်မာပြည်၌ အလုပ်လုပ်ချင်လျက်အလုပ်လက်မဲ.များအလွန်ပေါများနေခြင်းကိုအမြင်သာဆုံးသာဓကအဖြစ် အဝေးပြေးကားဂိတ်များတွင် ခရီးသည်များလက်မှတ်ဝယ်ရန်လိုက်ပြခြင်းမှတပါး အခြားဘာအလုပ်မှမယ်မယ်ရရမရှိသော ဂိတ်ဂျပိုးများမြန်မာနိုင်ငံအနှံ.ပေါများနေခြင်းကသက်သေခံနေပါသည် ။နိုင်ငံခြားသို.သွားရောက်ကျွန်ခေံနေကြရသော တရားမ၀င်အလုပ်သမားများးစွာကသက်သေခံနေပါသည် ။ ယခင်ကအမှိုက်သိမ်းခြင်း ၊ကုန်ထမ်းခြင်း ၊လယ်ကူလီလုပ်ခြင်း ၊ ၊မြင်းလှည်းမောင်းခြင်း၊လန်ခြားဆွဲခြင်း၊ညစောင်.ဒရ၀မ်လုပ်ခြင်း၊အိမ်ဖော်လုပ်ခြင်း စသည်. အလုပ်များကိုမြန်မာများမလုပ်ကြပါ ။တိုင်းတပါးသားများကိုသာခိုင်းကြလျက် စာရေး၊စာချီ ၊ကုန်သည် ပွဲစား ၊လယ်ပိုင်ရှင် စသောအလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးမျိုးကိုသာမြန်မာများလုပ်ခဲ.ကြပါသည် ။ ကျွန်ပ်တို.ဘိုးဘွားများလက်ထက်က အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးများကိုသာ လုပ်ကိုင်လာလဲ.သောမြန်မာလူမျိုးများသည် ယခုအခါ ကမ်းနားတွင်ကုန်ထမ်းနေသူများကိုသွားကြည်.လျှင်လည်း မြန်မာ ၊ စည်ပင်သာယာ အမှိုက်ကျုံးသူအားလုံးမှာ မြန်မာ ၊ ကုန်တိုက်ကြီးများတွင် သန်.ရှင်းရေးဝန်ထမ်းအားလုံးမှာ မြန်မာ ၊ဒရ၀မ်အားလုံးမြန်မာ ၊ ဆိုက်ကားဆရာအားလုံးနီးပါးမှာမြန်မာ ၊စားသောက်ဆိုင်တွင်စားပွဲထိုးအားလုံးမှာ မြန်မာ ၊ကေတီဗီ နှင်.အနှိပ်ခန်းမှကောင်မလေးတွေအားလုံးမြန်မာ၊ ကားစပယ်ယာအားလုံးမှာမြန်မာ၊ တရုတ်အသုဘချလာရာတွင်ရှေ.မှဆိုင်းဘုတ်ကိုင်လာသူများမှာ နေ.စားဖြင်.ခေါ်လာသောမြန်မာ ၊ ရှအာ ကုလားများ၏ တမန်တော်နေ.တွင် မြင်းကြီးနှင်.ညသန်းခေါင်စီတန်းလှည်.လည်ရာတွင် မီးအိမ်ကိုင်၍ ရှေ.မှချီတက်ရသူများမှာ နေ.စားဖြင်.အငှားခံရသည်.မြန်မာ ၊ ကွမ်းယာရောင်းသူအားလုံးမှာ မြန်မာဖြစ်ပါပေ၏ ။
ဆန်.ကျင်ဘက်အဖြစ် ကားစီးလာသူ အတော်များများမှာတရုတ်ကုလား ၊ကုန်တိုက်များတွင်ဈေးဝယ်လာသူတော်တော်များများမှာ တရုတ် ကုလား ၊ မြို.တမြို.၏ နေရာကောင်းလမ်းမကြီးတွေ၏ပိုင်ရှင်များမှာတရုတ်ကုလား ၊ ဈေးကြီးတွေ၏ အဓိကရောင်းချသူများမှာတရုတ်ကုလား ၊ ကုန်သည်များ သူဌေးများအတော်များများမှာလူမျိုးခြားများဖြစ်ကြကုန်ပေ၏ ။ တရုတ်လိုရှာ၊ ကုလားလိုစု ၊ ဗမာလိုမဖြုန်းနဲ.ဟူသောစကားပုံလိုပင် မြန်မာတို.သည် အသုံးအဖြုန်းအပျော်အပါးတွင်လဲဝါသနာကြီးပေ၏ ။ဆယ်.နှစ်လရာသီပါတ်လုံး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမရှိသောလဟူသည်မရှိ ။ ဘာသာသာသနာအပေါ်လေးနက်မှုမရှိ ၊ သို.သော် ရှင်ပြုအလှူပွဲအတွက်မူ ကိုးနှစ်ဆယ်နှစ်စုဆောင်းထားသောငွေများတနေ.တည်းကုန်အောင် သုံးပစ်တတ်ကြသည် ။ ရှင်ပြုရဟန်းခံခြင်း၏အဓိကအချက်ဖြစ်သော သာသနာ.ဘောင်သို.၀င်ခြင်းအနှစ်သာရထက် ဇာတ်ပွဲ၊အငြိမ်.ပွဲများငှားခြင်း ၊ ၀င်းခင်းခြင်း ၊မဏ္ဍပ်အကောင်းစားဆောက်ခြင်း ၊ ဆင်များ မြင်းများငှား၍ရှင်လောင်းလှည်.ခြင်း ၊ ၀က်ဘယ်နှစ်ကောင်ပေါ်၍ကျွေးမွေးခြင်းစသည်များကိုဂုဏ်ယူတတ်ကြ ၊ ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်ပြုလုပ်တတ်ကြသည် ။တလုံး (ဘောလုံး)နှစ်လုံး၊သုံးလုံး လောင်းကစားရာတွင်လည်း တနိုင်ငံလုံးပလိပ်ရောဂါလိုပျံ.နှံ.နေသည် ။ လူငယ်များတွင် အရက်သေစာသောက်စားတတ်သူအများစုဖြစ်နေကြ၏။မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေကြသူများမှာလည်းမရှားပေ ။ ပလွှားခြင်း ၊ကြွားဝါခြင်း ၊ ရှိတာထက်ပိုသုံးခြင်း ၊ အလွယ်တကူအကြွေးယူခြင်း တို.သည် မြန်မာ.စရိုက်များဖြစ်လာသည် ။ ချွေတာခြင်း ၊ စုဆောင်းခြင်း ၊ အားသွန်ခွန်စိုက်အလုပ်လုပ်ခြင်းတို.သည် မြန်မာနှင်.ဝေးကွာလာသည် ။အစိုးရဘက်ကလည်းအလုပ်အကိုင်နေရာအခွင်.အလမ်းများများစားစားဖန်တီးပေးခြင်းမရှိ ။အစိုးရအာဏာပိုင်သူများနှင်. ပေါင်းကာ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းလုပ်သူများသာ ကြီပွားချမ်းသာကြသည် ။ သာမန်လူထုအတွက်ငွေတွင်းမှာနက်ပြီးရင်းနက်လာ၏ ။ ထိုအခါ အမျိုးတွေဘာတွေမစောင်.နိုင်တော. ၊ ဇာတိဂုဏ်တွေဘာတွေမလုပ်နိုင်တော. ။ ကြိုက်မရှက် ငတ်မရှက်ဆိုသလို ထမင်းငတ်လာတော. ရရာအလုပ်များ ၊ အလကားရသည်.အရာများကိုမျက်စောင်းထိုးလာကြသည် ။ တရုတ်ဘုံကျောင်းကပေးလျှင်လည်း သွားယူသည် ၊ ကုလားဗလီမှ ပေးလျှင်လည်းရှက်ရကောင်းမှန်းမသိ ၊ဟိန္ဒူဘု၇ားကျောင်းမှကျွေးသည်ကိုလည်းသွားစားသည် ။ခရစ်ယန်တို.အလှူလုပ်လျှင်လည်းသွားယူသည် ။ မည်မျှနိမ်.ကျသောအလုပ်ဖြစ်စေငွေရလျှင်လုပ်သည် ။အချို.လူငယ်များမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးသားကောင်များဖြစ်နေကြသည် ။ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို.အတွက် ဘာမဆိုလုပ်ဝံ.သူများဖြစ်လာကြသည် ။ငွေရလိုမှုတခုအတွက်ကိုယ်.မြန်မာနိုင်ငံသားချင်း မိန်းကလေးများကို တရုတ်နိုင်ငံသို.လူမှောင်ခိုတင်ပို.ကြသည် ။ နယ်စပ်မှဘင်္ဂလီများကိုအခကြေးငွေယူ၍ ရန်ကုန်သို. မှောင်ခိုပို.ဆောင်ကြသည်မှာလည်း မြန်မာများဖြစ်သည် ။
ဖားကန်.သည် ယခင်ကပင် မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စတွင်နာမည်ကျော်သည် ။ ယခုအခါပိုဆိုးလာသည်.သဘောရှိသည် ။ အစိုးရသစ်မတက်မီယခင်အစိုးရလက်ထက်က ဒေသခံမူးယစ်ဆေးဝါးဆန်.ကျင်သူများက မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချနေသူတဦး၏အိမ်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး၇ှာဖွေကြရာ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင်.အတူ စာရင်းစာအုပ်တအုပ်ကိုတွေ.ရှိရသည်ဆို၏ ။ထိုစာရင်းစာအုပ်အရ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များသို.လာဘ်ပေးရငွေမှာ တနေ.လျှင်ကျပ်သိန်းသုံးရာ ခန်.ရှိသည်ဆိုသောသတင်းထွက်လာ၍ အတော်ကိုအံ.သြတုန်လှုပ်ရသည် ။သို.သော်ထူးပြီးဆန်းသောကိစ္စတော.မဟုတ် ။ ။မီးခိုးကြွက်လျှောက်ဆက်လက်အရေးယူခြင်းကားမရှိ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေနှင်.မလွတ်ကင်းသော မကောင်းမှုဒုစရိုက်အလုပ်လုပ်ရာ၌ လိုင်းကြေးဟူသောစကားမှာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကြားနေကျစကားပင်ဖြစ်နေတာတပြည်လုံးအသိပင်ဖြစ်သည် ။ယခုထက်လည်းလိုင်းကြေးယဉ်ကျေးမှုကရှိနေသည် ။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် လိုင်းကြေးဆိုသောဓလေ.ပပျောက်ရေးကိုအရင်လုပ်သင်.သည် ။ မူးယစ်ဆေး၏သားကောင်ဖြစ်သွားသောအခါ ဘ၀မျှော်လင်.ချက်တွေ ၊မိသားစုကိစ္စတွေအသာထားလို. နေ.စဉ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနိုင်ရေးကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတော.သည် ။ထိုအခါ ရေမဆေးကျောက်ဆိုသော သူများလွှင်.ပစ်သောမြေစာပုံအောက်တွင်သွားထိုင်ကာ အသက်ဘေးကိုမငဲ.နိုင်ပဲ ငွေရှာကြသော မူးယစ်ဆေးဝါးသမားများလည်းမနည်းပေ ။ သို.သော် ရေမဆေးကျောက်ရှာသူအားလုံး မူးယစ်ဆေးဝါးသမားချည်းဟုမဆိုလို ။ သမုဒ္ဒရာဝမ်းတထွာဆိုသလို ဆင်းရဲတွင်းနက်လွန်းသောကြောင်. မရှက်နိုင် ၊မကြောက်နိုင်တော.သော မိသားစုများစွာမြန်မာပြည်မှာရှိနေသည် ။
ယခုအခါမြန်မာပြည်သည် မျှော်လင်.ချက်ရောင်နီသန်းလာပြီဟုဆို၏ ။ ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးးကောက်တင်မြှောက်ထားသောအစိုးရ (ပြည်ထဲရေး၊ကာကွယ်ရေး၊နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနများမှလွဲ၍)တက်လာပြီဟုဆိုကြသည် ။ အိမ်သာသဖြင်. ဧည်.သည်များလည်းမပြတ်အောင်လာကြသည် ။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစသည်ဖြင်. ကမ္ဘာ.ခေါင်းဆောင်များမြန်မာနိုင်ငံသို.ရောက်လာကြသည် ။ မြန်မာသမ္မတနှင်. လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အာင်ဆန်းစုကြည်တို.ကိုလာအိုနိုင်ငံမှဖိတ်ကြားသဖြင်.ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက်ကြသည် ။ ရုရှနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော ရုရှား-အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက် သမ္မတဦးထင်ကျော်သွားရောက်သည် ။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများလည်းတိုးတက်ဝင်ရောက်နေသည် ။ ကမ္ဘာ.ဘဏ်စသည်တို.မှ ငွေထုတ်ချေးချင်သူများလည်းမရှားပေ ။ နိုင်ငံသည် လေယာဉ်တစီးလို ကောင်းကင်သို.တက်ဖို.ပြေးလမ်းဝယ်အရှိန်ယူနေသောကာလဖြစ်သည် ။တကယ်မတက်နိုင်သေးသော်လည်း အရှိန်ကောင်းကောင်းရလာလျင်လေထဲသို.တက်တော.မှာဧကန်မလွဲဖြစ်သည် ။ မြန်မာသည်ကြီးပွားဖို.လမ်းစပေါ်နေချေပြီ ။ ထိုအချိန်တွင် ပထမဆုံးဦးစားပေးလုပ်စေချင်သည်ကား မြန်မာနိုင်ငံသားတို.ရင်ထဲဝယ် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ.ပြီဖြစ်သော မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ် ။ ဆုံးရှုံးသွားတာကြာပြီဖြစ်သော အမျိုးဂုဏ်သိက္ခာမစောင်.နိုင်ကြမှုတို.ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရမည်ဖြစ်သည် ။ ငွေရလိုမှုတခုအတွက်ဂုဏ်သိက္ခာကင်းမဲသောအလုပ်များလုပ်နေရသောမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင်.အရေးများ အမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်ပေးစေလိုပါသည် ။အောက်ဆုံးအဆင်.တွင်အသက်ရှင်နေကြရသောမြန်မာနိုင်ငံသားများစွာကိုဆင်းရဲတွင်းမှဆွဲထုတ်ရမည်ဖြစ်သည် ။ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုတိုက်ဖျက်ရမည်ဖြစ်သည် ။ သို.သော် ယခင်အစိုး၇လက်ထက်ကလို ဘူဒိုဇာဖြင်. ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေးလုပ်နည်းမျိုးကိုတော.အတုမခိုးသင်.ပါ ။ စာရင်းတွေအတောမသတ်ကောက်ပြီး အလုပ်မဖြစ်တာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ပါ ။ အသက်ကိုမငဲ.ပဲ ဖားကန်.၌ရေမဆေးကျောက်ရှာနေသူများ ၊ အရှက်ကိုမငဲ.ပဲ ဗလီရှေ.၌ အမဲသားတောင်းနေသူများ ပပျောက်သွားအောင် ၊ဆင်းရဲသားတွေအဆင်ပြေအောင် နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင်.ဆောင်ရွက်သူများကိုပြည်သူတွေကအားကိုးတကြီး စောင်.မျှော်နေပါကြောင်း ။
အောင်လံမြို့နယ်၊ ပြလို့ရွာ။ ရန်ကုန်-ပြည်ကားလမ်းဘေး၊ အထကကျောင်းအနီးရှိ (၈)ပင်x(၃)ခန်း တစ်ထပ်ပတ်ကားအိမ်နှင့် အလျား(70)ပေx အနံ (45)ပေရှိ မြေကွက်အား
သိန်း (350)ဖြင့် ရောင်းချပါမည်။
ဆက်သွယ်ရန် ဦးနေမြတ်- (09)423661132
ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းထိုက်(09)5310195 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။